Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ịlanahụ ọrịa kansa akpa ume abawanyela
Akụkọ ọhụrụ: Ịlanahụ ọrịa kansa akpa ume abawanyela, mana ọ na-anọgide na-adị ala nke ukwuu maka ndị nwere agba.
The ọhụrụ "State of Lung Cancer" akụkọ na-ekpughe na ọrịa cancer akpa ume afọ ise rịrị elu 14.5% na mba ruo 23.7% ma ka dị obere n'etiti obodo ndị nwere agba. Ndị otu American Lung Association's 4th akụkọ kwa afọ, nke ewepụtara taa, na-akọwapụta ka ọnụ ọgụgụ nke ọrịa cancer akpa ume si dị iche site na steeti wee nyochaa isi ihe na-egosi na US dum gụnyere: ikpe ọhụrụ, nlanarị, nchọpụta mmalite, ọgwụgwọ ịwa ahụ, enweghị ọgwụgwọ na ọnụego nyocha.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ dị ndụ dị ala, ndị na-agba agba bụ ndị a chọpụtara na ha nwere ọrịa cancer akpa ume na-eche ihu na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ndị ọcha, gụnyere ndị na-adịkarịghị achọpụta ya n'oge, na-erughị ike ịnweta ọgwụgwọ ịwa ahụ na ọ ga-abụ na ha agaghị enweta ọgwụgwọ ọ bụla. Nke a bụ afọ nke abụọ na akụkọ "State of Lung Cancer" na-enyocha ibu ọrịa kansa akpa ume n'etiti agbụrụ na agbụrụ dị nta na ọkwa mba na steeti.
"Akụkọ ahụ gosipụtara ozi dị mkpa - ọtụtụ ndị mmadụ na-agbanarị ọrịa cancer akpa ume; Otú ọ dị, ọ na-emesikwa eziokwu ahụ ike na, n'ụzọ dị mwute, ọdịiche ahụike na-adịgide maka obodo ndị nwere agba. N'ezie, ebe ọnụ ọgụgụ nlanarị ọrịa cancer akpa ume nke mba mụbara ruo 23.7%, ọ na-anọgide na naanị 20% maka mpaghara agba yana 18% maka ndị Black America. Onye ọ bụla kwesịrị ohere iji bie ndụ zuru oke na ahụike, ya mere a ghaghị imekwu ihe iji dozie esemokwu ahụike ndị a, "Harold Wimmer, Onye isi ala na onye isi oche nke otu Lung Association kwuru.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 236,000 nọ na US ka a ga-achọpụta ọrịa kansa akpa ume n'afọ a. Akuko 2021 "State of Lung Cancer" choputara usoro mba ndia na udu nlanarị, nchoputa mmalite, na ọgwụgwọ nke oria a:
Ọnụnọ nlanarị: Ọrịa cancer akpa ume nwere otu n'ime ọnụ ọgụgụ nlanarị afọ ise kacha ala n'ihi na a na-achọpụtakarị ikpe n'oge ọzọ, mgbe ọ dị obere ka a ga-agwọ ya. Nkezi mba nke ndị mmadụ dị ndụ afọ ise ka a chọpụtachara ọrịa kansa akpa ume bụ 23.7%. Ọnụego nlanarị kacha mma na Connecticut na 28.8%, ebe Alabama kacha njọ na 18.4%.
Nchọpụta mmalite: Na mba, naanị 24% nke ikpe ka a na-achọpụta na mmalite mgbe ọnụọgụ ndụ ndụ afọ ise dị elu karịa (60%). N'ụzọ dị mwute, 46% nke ikpe anaghị ejide ruo oge ikpeazụ mgbe ọnụego nlanarị dị naanị 6%. Ọnụego nyocha nke mbụ kacha mma na Massachusetts (30%), yana nke kacha njọ na Hawaii (19%).
Nyochaa ọrịa cancer akpa ume: Nyochaa ọrịa cancer akpa ume na nyocha CT dị ala kwa afọ maka ndị nọ n'ihe ize ndụ dị elu nwere ike ibelata ọnụ ọgụgụ ọnwụ cancer akpa ume site na 20%. Na mba, naanị 5.7% nke ndị nọ n'ihe egwu dị elu ka enyochara. Massachusetts nwere ọnụ ọgụgụ nyocha kachasị elu na 17.8%, ebe California na Wyoming nwere nke kachasị na 1.0%.
Ịwa ahụ dị ka usoro ọgwụgwọ mbụ: Enwere ike ịgwọ ọrịa kansa akpa ume na ịwa ahụ ma ọ bụrụ na achọpụtara ya n'oge mmalite ma ọ gbasaaghị. Na mba, ọ bụ naanị 20.7% nke a na-awa ahụ.
Enweghị ọgwụgwọ: Enwere otutu ihe kpatara na ndị ọrịa agaghị enweta ọgwụgwọ mgbe nyochachara ya. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a nwere ike bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere, ma ọ dịghị onye kwesịrị ka a gwọọ ya n'ihi enweghị onye na-enye ya ma ọ bụ ihe ọmụma onye ọrịa, ihere metụtara ọrịa cancer akpa ume, igbu egbu mgbe nyochachara ya, ma ọ bụ ọnụ ahịa ọgwụgwọ. Na mba, 21.1% nke ikpe anaghị enweta ọgwụgwọ ọ bụla.
Mkpuchi Medicaid: Mmemme Medicaid steeti maka ụgwọ ọrụ bụ otu n'ime naanị ndị na-akwụ ụgwọ ahụike anaghị achọ ikpuchi nyocha ọrịa kansa akpa ume maka ndị nwere nnukwu nsogbu. Otu Lung Association nyochara amụma mkpuchi mkpuchi ọrịa cancer akpa ume na mmemme ụgwọ ọrụ maka ọrụ Medicaid steeti iji chọpụta ọnọdụ mkpuchi mkpuchi ọrịa kansa akpa ume ugbu a maka ndị Medicaid wee chọpụta na mmemme ego Medicaid steeti 40 na-ekpuchi nyocha ọrịa kansa akpa ume, mmemme asaa anaghị enye mkpuchi, steeti atọ enweghị ozi dị na amụma mkpuchi ha.
Ọ bụ ezie na nchoputa akụkọ "State of Lung Cancer" na-egosi ọrụ dị mkpa a ga-arụ, enwere olileanya. Na Maachị nke 2021, United States Preventive Services Task Force gbasaara ndụmọdụ ya maka nyocha ka ọ gụnye oke afọ yana ndị na-ese anwụrụ ugbu a ma ọ bụ ndị mbụ. Nke a mụbara ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị na ndị isi ojii America bụ ndị tozuru maka nyocha ọrịa kansa akpa ume.
Ndị otu akpa ume na-agba onye ọ bụla ume isonye na mbọ iji kwụsị ọrịa kansa akpa ume. Gaa na Lung.org/solc ka ịmatakwu gbasara ọrịa cancer akpa ume na steeti gị wee bịanye aka n'akwụkwọ arịrịọ anyị ka iwelie ego maka erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa iji chebe ahụike obodo anyị pụọ na ọrịa, gụnyere ọrịa kansa akpa ume.
Maka ndị na-ese anwụrụ ugbu a na ndị bụbu, e nwere akụrụngwa na-azọpụta ndụ. Chọpụta ma ị tozuru maka nyocha ọrịa kansa akpa ume na SavedByTheScan.org, wee gwa dọkịta gị gbasara nyocha gị.